Maxaad Kala Socotaa Hal Qoys Oo Ku Dhawaad Hal Qarni Haysta Bollywoodka Hindiya | Kaafi News
Maxaad Kala Socotaa Hal Qoys Oo Ku Dhawaad Hal Qarni Haysta Bollywoodka Hindiya
Muddo ku dhow hal qarni, magaca abtirka uu galo ee Kapoor waxa uu madadaaliyaa malaayiin qof oo ka mid ah dadka daawada filimada Hindiya ee ay sameyso shirkadda Bollywood-ka.
Jilayaal magacaas ku abtirsada oo hal qoys kasoo wada jeeda ayaa sanad walba heerka ugu sarreeya uga jira sameynta filimada.
In kastoo xubno badan oo ka mid ah qabiilkan ay noqdeen atooreyaal, atariishooyin, filimhageyaal, filim soo saareyaal iyo xitaa farsamayaqaannada dhinaca stuudiyaha, haddana waxaa jira shakhsiyaad gaar ah oo magacyadooda aysan waligood ka hari doonin taariikhda Bollywood-ka.
Qoyskan waxay sheekada jilistooda kasoo billaabaneysaa 1928-kii, markaasoo Prithviraj Kapoor uu kasoo muuqday filimkiisii ugu horreeyay. Xilligaas waxaa la sameyn jiray filimada aamusnaanta, laakiin magaciisu ma aamusneyn, si weyn ayuuna ugu soo caan baxay xirfaddiisa.
Filimkii ugu horreeyay ee Prithviraj Kapoor laga daawado waxaa lagu magacaabaa Do Dhari Talwar.
Atoorihii caanka ahaa ee dhintay ‘mar buu Soomaaliya aflagaadeeyay’
Labadan Jilaa ee caanka ah maxaa loogu maxkamadeynayaa fal ay sameeyeen iyagoo filim jilaya?
Kaddib markii uu horumarin ku sameeyay hab jilitaankiisa, wuxuu kasoo muuqday filimkii ugu horreeyay ee Hindiya ee lagu hadlo. Wuxuu ahaa filimkii Alam Ara, oo soo baxay sanadkii 1931-kii.
Wuxuu jilay in ka badan 40 filim. Sanadkii 1944-kiina wuxuu aasaasay masraxa Prithvi, oo uu isaga si gaar ah u lahaa. Aabaalmarinnadii uu ku guuleystay waxaa ka mid ah tan lagu magacaabo Dadasaheb Phalke, oo ah billadda ugu sharafta badan dalka Hindiya.
Raj Kapoor waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa ninka guulaha ugu badan ka gaadhay saddexdii wiil ee uu dhalay Prithviraj, kuwaasoo dhammaantood noqday atooreyaal.
Kaddib markii uu guushiisii ugu weyneyd ee dhinaca jilista gaadhay, wuxuu raacay raadkii aabbihiis, wuxuuna aasaasay shirkadda RK Films.
Intii u dhaxeysay 1950-meeyadii ilaa 1960-meeyadii ayuu ku raaxeystay xifraddiisa jilitaanka, mar uu atoore ahaa iyo mar uu filim soo saare ahaaba. Filimadiisii ugu caansanaa waxaa ka mid ah: Awaara, Barsaat, Shree 420 iyo Mera Naam Joker.
Wuxuu dhashay 14 December 1924, wuxuuna dhintay 2 June 1988,
Qoraalka sawirka,Rishi Kapoor wuxuu ahaa nin xirfaddiisa qoob ka ciyaarka ay sarreyso
Rishi, oo ah wiilkii ugu yaraa ee uu dhalay Raj Kapoor, wuxuu isagoo carruur ah kasoo muuqday filim uu jilayay aabbihiis. Laakiin markii uu gaadhay da’da 20 sano ayuu la wareegay jilistii filimada Bollywopodka, wuxuuna ka mid noqday atooreyaashii ugu caansanaa ee abid soo maray Hindiya.
Muddo tobannaan sano ah ayuu hormuud u ahaa jilayaasha Hindiya. Markii ay da’da ka daba timid wuxuu u wareegay doorka caawinta atooreyaasha ee jilista.
Bishii April ee sanadkii 2019-kii ayuu geeriyooday kaddib markii uu 2 sano la xanuunsanayay cudurka kansarka.
Karisma iyo Kareena Kapoor
Karisma, oo hoggaamineysay jiilkii afaraad ee reer Kapoor, waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee xubin ka ah qoyskan ee jilitaan sameysa.
Waxay shaleemooyinka qabsatay sannadihii 1990-meeyadii iyo horaantii 2000. Filimkii Raja Hindustani ayuu ahaa kii ay guusha ugu weyn kusoo hoyisay, kuna hanatay abaalmarinta Filmfare-ka ee atariishada ugu fiican.
Walaasheed ka yar, Kareena, ayaa 10 sano kaddib billowgii Karisma soo gashay xirfadda jilitaanka, iyadoo kasoo muuqatay filim dagaal ah oo lagu magacaabo Refugee.
Gabdhaha uu awowga u ahaa Raj Kapoor wali way ku dhex jiraan jilista filimada, waxayna magacyadooda ka mid yihiin kuwa ugu caansan ee atariishooyinka.
Ranbir, oo ah wiilka uu dhalay Rishi, wuxuu isagoo dhowr iyo 30 jir ah soo caan baxay sanadkii 2009-kii, markaasoo uu jilay saddex filim oo dhammaantood wada guuleystay, iskuna xigay.
Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay, xiddigan reer Kapoor sare unbuu usii socday. Wuxuu aruursaday amaalmarinno badan oo uu ku muteystay atooraha ugu wanaagsan. Wuxuu kasoo muuqday filimka Sanju, oo ka mid ah filimada lacagta ugu badan kasoo xareeyay taariikhda Bollywood-ka.
Hadda waa mid ka mid ah atooreyaasha lacagta ugu badan ku qaata jilitaanka, wuxuuna heystaa adduun lacageed oo gaadhaya US$43.6 million, oo uu ku helay 10 sano kaliya gudahood.